Maaskaro Wajiga lagu tuuri karo, Maska N95, Daboollada la iska tuuri karo, Dharka PPE - Tianli
Wax dheeri ah baroGO
Quanzhou Tianli Production Product Production Co., Ltd (SSP) oo la aasaasay sanadkii 2010, wuxuu ku yaal magaalada Quanzhou, Fengze oo hodan ku ah timo qurxinta timaha.Quanzhou Tianli Production Product Production Co., Ltd. (SSP) oo la aasaasay sanadkii 2010, wuxuu ku yaal Magaalada Quanzhou, Fengze oo hodan ku ah dhir udgoon. Shirkadeena waxay ku takhasustay soo saarista alaabooyinka difaaca ee neefsashada.
150 mm Qalabka Darbiyada Qoyan ee Qalabka
4 inji dherer ah oo dheemanka dheemanka dheeman ka samaysan
Caaga PDR dhagaxa ah ee qalabka qalalan ee polishing ee ...
PM2.5 warqad la oggolaaday
Waxyaabaha ugu waa weyni waa noocyo kala duwan oo mashiinka 'PPE' ah iyo waji-xidhka 'Pm2.5 waji-darkooda', sida waji-qaabeynta koob-ka-sameynta sare ah, waji-xajista filtarrada sare ee isku laabma iyo taxane kale oo fara badan iyo noocyo kala duwan.
Maaskaro Pm2.5 ah
Wejiga mashiinka shaashad koob-qaabeynta leh
Waxaan hubin doonnaa inaad had iyo jeer adeegsato
Dammaanadda ugu awoodda badan.
Xirfad iyo dhaqan
Shirkadda waxaa la aasaasay 2008.
Waa alaabada kaliya ee shirkad cusub oo loo yaqaan 'PM2.5 neefsashada' gudaha Shiinaha.
Maskaxda Qalliinka N95
Caaga PDR balaastigga ah ee qalabka qalalan ee sinta polishing ee iibinta
waa maxay dadka ku hadal
Quanzhou Tianli Product Production Co., Ltd (SSP) oo la aasaasay sanadkii 2010, wuxuu ku yaal magaalada Quanzhou, Fengze oo hodan ku ah geedaha timaha leh. Shirkadeena waxay ku takhasustay soo saarista alaabooyinka difaaca ee neefsashada.
Maska nooga ilaaliya gaarka ah ee astaanta MASKin waxaa yaqaan macaamiisha waxayna ku guuleystaan ​​sumcad wanaagsan sidoo kale waxay dhisaan muuqaal tayo sare leh maanka ururada xirfadlayaasha iyo macaamiisha. SSP waxay had iyo jeer la safan tahay falsafada shirkadda ee sii wadista horumarka, abuurista qiimaha.
Tan iyo markii la aasaasay, warshaddeennu waxay soo saareysay alaabada heerka koowaad ee adduunka iyadoo la waafajinayo mabda'a tayada marka hore. Waxyaabahayagu waxay heleen sumcad aad u wanaagsan xagga warshadaha iyo kalsoonida ka dhexeysa macaamiisha cusub iyo kuwii hore ..